Enterprise Yemagariro Media Kushambadzira Platform Zvimiro | Martech Zone
Enterprise Yemagariro Media Kushambadzira Platform Zvimiro
Chitatu, Kurume 10, 2021 Muvhuro, March 15, 2021 Douglas Karr
Kana iwe uri rakakura sangano, pane kazhinji zvitanhatu zvakakosha zvinhu zvebhizinesi software zvaunogara uchida:
Akaundi Hierarchies - pamwe chinonyanya kubvunzwa chechero bhizinesi chikuva kugona kuvaka hierarchies dzeakaunzi mukati memhinduro. Nekudaro, kambani yemubereki inogona kushambadzira yakamirira brand kana franchise iri pasi pavo, kuwana yavo data, kubatsira mukutumira uye kugadzirisa akawanda maakaundi, uye kudzora kuwana.
Maitiro Ekubvumidza - masangano emabhizimusi anowanzove nematanho ekubvumidzwa kuti agadzirise zviri pamutemo, zvekutonga, uye zvemukati zvekuteedzana. Iyo yekudyidzana midhiya inovandudzwa, semuenzaniso, inogona kufamba ichibva kune inosangana ichienda kune graphic dhizaini, kune maneja, kune zvemutemo, kudzokera kune mupepeti, kuburikidza kune muparidzi. Kuita aya emaoko-ruoko kuburikidza neemail kana maspredishiti anogona kubuda mukutonga
Kuteerera, Kuchengetedzwa, Matanda, uye Backups - Mumakambani ane hunyanzvi kana eruzhinji, kuchengetedzeka kwakakosha saka mapuratifomu anowanzodiwa kuti aongorore maitiro echitatu-bato, uye ave nezvakachengetedzwa zvemukati nezvakachengetedzwa pane zvinoitwa mukati mehurongwa.
Saina-Kusainira (SSO) - Makambani anoda kutonga mukati mezvikumbiro zvavanopinda mukati kuti vatore muchikuva zvinowanzo goneswa kuburikidza neDhipatimendi reIT kana hofisi hofisi.
Kupinda Mabhiza - Mabasa uye mvumo zvakakosha kune bhizinesi software kuona kuti mumwe munhu haakwanise kudarika nzira dzakabvumidzwa kana kuita zviito zvavasina mvumo.
Chibvumirano cheZinga reSevhisi (SLA) - Mune mamiriro epasirese, kumusoro-nguva kwakakosha saka kubvumirana paSLA kunowanzo fanirwa kusaina chibvumirano nechero bhizinesi chikuva. Zvakare, kugadzirisa uye nguva yekuzorora zvinoburitswa pachena kuitira kuti vasapindire nekushanda.
Multi-Language Support - Isu tinorarama mune hupfumi hwepasirese, saka kugona kutsigira mitauro yakawanda mukati mechikuva mushandisi interface pamwe nekuburitsa mumitauro yakawanda kwakakosha. Nehurombo, mitauro yekurudyi-kuruboshwe inowanzo kuve yekufungisisa sezvo mapuratifomu akayera uyezve zvinonetsa kudzoka uye kugadzirisa zvakare mhinduro.
Yakawanda-Nguva Zone - Unogona kushamisika kuti makambani madiki haatore nzvimbo dzenzvimbo kuti afunge kana achitsikisa kutaurirana. Kunze kwekumisikidza yega yega mushandisi yenguva nguva yemukati kupuratifomu, iwe unogona kuronga ako akanangwa kutaurirana kunzvimbo yenguva yenguva yekuenda kunangwa? Makambani mazhinji ane account-yakafara nguva yenzvimbo marongero pane kusanganisa enzvimbo dzenguva mukati mese.
Kubatanidzwa - Kunyorera Zvirongwa Zvirongwa (APIs) uye kugadzirwa kwakabatanidzwa kune mamwe masisitimu kwakakosha kune otomatiki, kuwana data, uye chaiyo-nguva yekuzivisa.
inishuwarenzi - Tiri kurarama munyika ine hukasha, saka chinodikanwa chekuti chikuva chine inishuwarenzi yakakwana yekufukidza chero mhosva inofanirwa mukati memabhizimusi software mapuratifomu. Zvichida chikuva chakabiwa uye kumhan'arwa kunotevera kubva kumagumo vatengi… mupi wako anogona kuve nemhosva yekubhadhara mari.
Enteprise Yemagariro Media Mapuratifomu
Chimwe nechimwe chepamusoro chinoda kuverengerwa mune yako yemagariro media chikuva kana iwe uri bhizinesi kambani. Social Media Mapuratifomu anowanzove neanotevera maficha:
Maitiro Ekutungamira - Iko kugona kwekukonzera kuteedzana kubva kune rimwe boka revashandisi mukati meiyo system kune imwe kwakakosha. Mushandisi wega wega ane ake mabasa uye mvumo inodzikamisa kugona kwavo. Mienzaniso:
Mucherechedzo wako unotaurwa online (uine kana usina kumakwa). Chikumbiro chinogona kuendeswa kune kutengesa kana chiri chekutarisira kubvunza? Kune rutsigiro rwevatengi kana iri nyaya yemutengi? Kushambadzira kana chiri chikumbiro chemidhiya?
Iwe une purogiramu yemushandirapamwe iyo inosanganisa kushambadzira munharaunda nematanho akatsanangurwa Yako yemagariro enhau chikuva inokonzeresa uye kumutsara basa riri kufamba kuburikidza neyako yezvikwata timu, kune ako magirafu kana vhidhiyo timu, kune yako yepamutemo kana manejimendi timu, kuburikidza nekubvumidzwa uye kuronga?
Kuronga uye Makarenda - Padanho rekambani uye repascount, unogona kusefa nekucherechedza karenda yako yemagariro uye kupa mabasa?
Kuteerera Kwemagariro uye Kufungisisa Kweshungu - Padanho rekambani uye repasi peakaunzi, iwe unogona here kuendesa mishandirapamwe yekuteerera kwevanhu, zvigadzirwa, uye indasitiri pamwe nekuongorora kwemanzwiro? Unogona here kurumidza kukumbira nzira mukati kukumbira timu yakakodzera kuti ipindure? Iwe unogona here kutaura nezve manzwiro nekufamba kwenguva kuti uve nechokwadi chekuti uri kuchengetedza hukama hwakanaka nevatengi vako?
Kubatanidzwa - Unogona here kushanda mukati mepakati pepuratifomu kuti utaure, utumire meseji, uye ubudise kuburikidza yega yega yemagariro midhiya chiteshi uye account iwe yauri kutarisira pane yekambani kana subaccount level Unogona kudhonza dhata kudzoka kune yako mutengi rutsigiro kana yevatengi hukama system kana paine zvikumbiro? Iwe unogona kusundira kubvunza kwekubvunza kune system yekubatsira kuona tarisiro uye kubatanidza madhi pakati pemishandirapamwe nekutengesa kukurudzira?
Rwendo Kubatanidzwa - Iwe unokwanisa here kugonesa omnichannel mutengi rwendo rwendo zvinokonzeresa uye zviitiko neako wekutaurirana nesocial media chiitiko sechinhu chinopa?
Machine Learning - Kushandiswa kweAI kuwana ruzivo rwakadzama pane yakazara brand, hurukuro online, kusangana kune mamwe mameseji (mazwi akakosha, mifananidzo), uye mukana wekutora, kusimudzira, kana kuchengetedza.
Kuzivisa uye maDashboard - Pazvinhu zvese zvechiitiko, unogona here kugadzira mishumo yakasimba padanho rekambani uye repascount iro rinogona kusefetwa nyore, kupatsanurwa, uyezve richifananidzwa nezviitiko pamishandirapamwe, mwaka, kana nguva yakatarwa?
Aya maficha ari kuwedzera kune ako akajairwa enhau midhiya maficha ayo anogonesa otomatiki, kugadzirisa, kuronga, uye makarenda eako enhau enhau kuedza.
Salesforce Yemagariro Studio
Salesforce Social Studio inopa zvese maficha anodiwa ku Enterprise Social Media Management, inosanganisira:
Administration - maneja vashandisi uye kuwana pane zvigadzirwa zveSalesforce.
Shambadzira - kugona kuronga uye kutsikisa pamazhinji maakaunzi uye chiteshi.
Shingairira - kugona kuenzanisira uye kujoina hurukuro, wobva wagadzirisa mafashama ekushandira kana kutengesa.
Ongorora - tarisa uye teerera kune ako maakaunzi uye uwane nzwisiso pasocial media pane mazwi akakosha uye nemanzwiro
Artificial Intelligence - Salesforce Einstein inogona kushandiswa kuisa otomatiki mifananidzo nehunhu kuti uwane nzwisiso yakadzama pakubatana.
Ndeipi Yakanakisa Enterprise Yemagariro Media Platform?
Haasi ese epamhepo mapuratifomu akagadzirwa neese maficha aunoona akanyorwa pamusoro. Ndakagara ndichikurudzira vatengi vangu kuti vapfuure nematanho enhanho apo kuisa mari mukushambadzira tekinoroji izvo hazviwanzo kusanganisira kufarirwa kwepuratifomu, mibairo yayo, kana kuzivikanwa kwayo nemakambani echitatu-bato.
Tanga Nezvinangwa Zvako - urikuyedza kuzadzikisa nei pasocial media platform? Nzwisisa iyo dambudziko, kukanganisa kwayo musangano rako, uye kukosha uko mhinduro huru yaizopa. Izvo zvinogona kusanganisira kuchengetedzwa pane zvemukati otomatiki, zvirinani kutora danho neicho chaicho-nguva data, kana kuwedzerwa kuchengetwa kwekutenda kune zvirinani mutengi ruzivo.
Sarudza Zvaunowana - ndezvipi zviwanikwa zvemukati (vanhu, bhajeti, uye nguva yenguva) zvaunofanirwa kuenda kuchikuva chitsva. Iwe une tsika yekurerwa? Iwe une timu here inogona kupinda mukushushikana kwekudzidza uye kutamira kune itsva system?
Ziva Zvino Maitiro - ongorora zvikwata zvako zvemukati kubva manejimendi kusvika kune vako vanotarisana nevatengi pane zvemagariro enhau zvauinazvo parizvino. Nzwisisa kuti iko kushushikana kuri pamwe nekukoshesa mapuratifomu azvino nemaitiro. Izvi zvichave nechokwadi chekuti iwe unosarudza mhinduro ichavandudza zvinoitwa nesangano pane kuvakuvadza. Izvi zvinogona kuitwa mune yakasarudzika yekutarisa mukutarisa yako inotevera yemagariro media chikuva.
Ongorora Vatengesi Vako - Enzanisa zviwanikwa zvako uye maitiro kune mumwe nemumwe mutengesi uye uve nechokwadi chekuti zvinosangana zvese kugona zviripo iwe zvaunoda. Panogona kunge paine mamwe maitiro anoda kubatika panguva yekuitwa kana kutama… asi edza kuona kuti uchaita sei maitiro ese zvakadzama kudzikisira njodzi yekutorwa.
Edzai Mukana - Kana iwe uchiisa mari mune akasiyana chikuva, ivo vanowanzo kuve nezvitsva maficha izvo zvinopa mukana wekuvandudza kudzoka kwako pane tekinoroji kudyara.
Kufambisa rako bhizinesi rezvenhau kuedza kune ipuratifomu nyowani inogona kuve inopa mubayiro inoshamisa mubhizimusi rekambani yako yekutengesa nedhijitari. Sarudza zvine hungwaru… uye usazeze kushanda ne consultant kana muongorori uyo anoziva nezveindasitiri uye anogona kukubatsira kuongorora uye kusarudza yako inotevera mutengesi.
Tags: bhizinesi rezvenhaumashandiro enhau enhaumashandiro enhau enhaumagariro crmevanhu vezvenhaumagariro enhau analyticszvemagariro midhiya yekuchengetedzamagariro enhau kutevedzerapasocial media crmpasocial media mutengi hukama hukama manejimendipasocial media nhare yekushambadzira chikuvasocial media moderationmagariro enhaupasocial media kutsikisazvemagariro midhiya mutemosocial media kurongapasocial media syndicationsocial media workflows
Email Design Dhizaini ye2021
Hei Doug, wongororo yakanaka! Shoutlet ipuratifomu ine simba guru, izvo ndezvechokwadi! Ndinovimba wapora.